Liiska Kooxaha Illaa Iyo Haatan Xaqiijistay Booskooda Wareega 16-ka Ee Champions League
Kadib kulamadii saddexaad ee tartanka Champions League, sideed kooxood ayaa xaqiijistay inay usoo baxeen wareega 16-ka ee tartanka xiisaha badan ee Dhagawayne. Balse, mid kasta oo kamid ah naadiyaddani ma hubto halka ay kaga soo bixi karto…
Hordhac: AS Roma v Real Madrid – Labada Koox Oo Isha Ku Haya Guul Kulankooda Champions League
Real Madrid ayaa booqan doonta dhigeeda AS Roma si ay ula soo dheesho kulan ka tirsan Champions League, oo ah lugta labaad oo ay kooxahaan wada qaataan. Hadaba, waxaan halkaan hoose aan idin kugu soo gudbin doonaa wax kasta oo aan uga…
Manchester City Oo Sii Dheeraysatay Hogaanka EPL Markii Ay Labo Cad Ka Dhigeen West Ham
Manchester City ayaa sii dheeraysatay hogaanka Premier League, kadib markii ay guul qurux badan ka heshay dhigeeda West Ham United. Sky Blues ayaa waxay uga mahad-naqeysaa guushaan ciyaartoydeeda Sane oo labo gool dhaliyay, Sterling iyo…
Luis Enrique Oo Shaaciyay Kooxda Uu Doonayo Inay Xagaagan Ku Guuleysato Champions League
Tartanka Champions League waa midka ugu xiisaha badan tartamada Yurub, waxaana koox iyo ciyaaryahan kasta uu ku hamiyaa inuu u qaado naadigiisa. Luis Enrique maamulihii hore ee Barcelona ayaa cadeeyay fekerkiisa ku saabsan dhinaca uu rabo…
PSG Oo Qarka U Saaran In Laga Saaro Tartanka UCL, Sababta Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay
Majaladda dalka Faransiiska kasoo baxda ee L'Equipe ayaa ku waramaya in xiriirka kubadda cagta Yurub uu ka fekerayo inuu Champions League ka saaro kooxda PSG. Sababta ayaa la sheegay inay salka ku hayso markii lagu soo oogay naadigaan…
Raphael Varane Oo Ka Hadlay Fekeriisa Ku Aadan Qaabka Liita Oo Ay Real Madrid Ku Bilaabatay Xagaagan
Abdirahman	 Nov 14, 2018
Real Madrid ayaa ku guda jirta soo kabasho ku saabsan qaab ciyaareed liita oo ay ku furteen fasal ciyaareedkan, kaasi oo meel xasaasi ah maraya. Los Blancos ayaa guuleystay saddexdii kulan ee ugu dambeysay oo ay ka dheesha dhamaan…
Kabtan Ramos Oo Ka Hadlay Hadii Ay Markii 4aad Gacanta Ay Ku Dhigi Karaan Champions League
Kabtanka Real Madrid ayaa xoojiyay fekeradda ku saabsan in Real Madrid ay markii afaraad oo xiriir ah ay ku guuleysan karto tartanka Champions League. Daafacaan udhashay dalka Spain oo wariyaasha la hadlay kadib kulankii ay wajaheen…
Man United Oo Guul Mucjiso Ah Ka Gaartay Juventus Xili Wiilasha Mourinho Ay Geesinimo Muujiyeen
Juventus oo marti soortay Manchester United ayaa kala kulantay dharbaaxo kulul kooxda dheesha horyaalka Premier League ee wadanka Ingiriiska. Naadiyadaan oo kulankoodu uu ahaa mid aad u xiiso badan waxay ku kala baxeen natiijo dhan 1-2,…